सोल्ससेक्सको बारेमा विशेष के छ र तपाइँ यसलाई कसरी लागू गर्नुहुन्छ?
सोलसेक्स के हो?
सोलसेक्सले कसरी काम गर्दछ?
लिंग लामो समयसम्म अवस्थित छैन, र यदि यो गर्छ भने, त्यसपछि ऊ उकालो, दिनचर्या र फैलाउने छ। काम पछि स्वागत चुम्बनले वास्तवमा कुनै पनि पार्टनरको कुनै चीजको अर्थ होइन, यो लगभग असहज छ।
सहनशीलताको लागि हेर्नुहोस्
पारदर्शी रूपमा, तथापि, दुवै पार्टनरहरू त्यहि छन्: उनीहरूले दुर्व्यवहार, भावनात्मक र भावनात्मक सम्बन्धका लागि धेरै वर्षको लागि पनि सेक्सको लागि पनि। साझेदारको साथ मात्र होइन, यो देखिन्छ, त्यो दूरीमा सारियो।
साउसेक्सक्स एकै व्यक्तिको लागि जुन जुन त्यहाँ छ त्यहाँ जुनसुकै जुनून को पुनरुत्थान गर्न को लागी हुन सक्छ।
सलसेक्सको साथमा सधै साझेदारको नजिक
आदत र दिमागी खुशीको
एक सम्बन्ध वा एक कुराकानीको सुरुवातमा तनाव सधैं त्यहाँ देखिन्छ। हामी आफैलाई साझेदारलाई दिन्छौं र उनीहरूलाई आकर्षक खोज्नदेखि रोक्न सक्ने केही पनि छ।
उदाहरणका लागि, धानयुक्त रोगीहरू जुन अब उनीहरूको दिमाग प्रयोग गर्न सक्षम छैनन् - र सम्भवतः तर्कको दृष्टिकोणबाट उनीहरूको यौन जीवन हेर्नको लागि कम मौका छ - यस्तै व्यवहार छ। नर्सिंग घरहरूमा क्यारियरले रिपोर्ट गर्छ कि यी धेरै निवासीहरू यौन सक्रिय हुन्छन्, तर स्वतः auto-sense मा।
सेक्सको लागि इच्छा त्यहाँ एक अस्थायी साझेदारीमा पनि छ। तर यदि आदत खेल्न आउँछ भने दिमागले केहि बिन्दुमा स्विच गर्छ - र केहि पनि गर्न को लागी यसलाई वास्तवमा आलोचना गर्न चाहनु भन्दा बढी छ। अनुकूलन चुम्बनले राम्रो महसुस गर्न सक्दैन, तर यो सोच छ कि सबै अन्य आस्ट्रा टोरो बनाउँछ।
सबैले यौन अनुभवहरू सम्झन्छन्, जुन शारीरिक बारे मात्र होइन, तर साझेदारको भावनात्मक सम्बन्ध। विशेष गरी नयाँ शुरुवात सम्बन्धमा सम्बन्धमा प्रेम सही छ र त्यहाँ अझै पनि कुनै बानी छैन जहाँ, यौन सम्पर्कको यो पहेलो बढ्यो। त्यो लेखक इवा-मारिया जरुर्स्टले "सोल सेक्स - रेडक्राइभिंग फिजिकल प्रेम" लाई आफ्नो पुस्तकमा पुनरुत्थान गर्न चाहन्छन्।
किनभने यो के यो यौन सम्बन्धमा हामीलाई राम्रो बनाउँछ? यो हरेक स्पर्श राम्रो छ, र कसरी हामी कसरी मनपर्दैन भनी वर्णन गर्न सक्छौं। नयाँ पार्टनरहरू एक-अर्कालाई थाहा पाइरहेका छन् र उनीहरूलाई मनपर्छ र कुन कुराले के गर्दैन। यो प्रत्येक साथीको प्रयास यो अन्य सन्दर्भमा खोज्न को लागी, उसले के रुचि गर्दछ र कुन प्रकारको स्पर्शले उनलाई के गर्नेछ र पत्ता लगाउनको लागि।
लामो समयसम्म सम्बन्धको सम्बन्धमा, हामी सधैँ पुन: पत्ता लगाउनुपर्छ जहाँ साझेदार बस छुनु पर्छ, प्रेम हो र खोजको निरन्तर यात्रा बनी रहन्छ। एक दिनचर्या अवस्थित छैन, साथै एक व्यक्ति आफैलाई जान्दछ - जसले सोलसेक्स यति आकर्षक, हमेशाको नयाँ इच्छा र साझेदार र निकटता को नयाँ नयाँ खोज गर्दछ, जुन उनीहरूको अनावरणमा आउँछ।
युवा जोडे - सहनशीलता
Soulsex हरेक व्यक्तिको साथ सुरु हुन्छ। आकस्मिक अभिवादनलाई साँच्चै सुखद लाग्छ?
यदि त्यसो भए, तिनीहरू राखिनेछन्। तर यदि तिनीहरूले तनाव र दूरी छोड्ने गर्छ भने, साझेदारलाई भन्नको लागि ठीक छ। उहाँ दोषी छैन, तर तथ्य यो छ कि चुम्बन फरक हुनुपर्छ। तीव्र। प्रामाणिक।
सायद तपाईं यसलाई एक्लै छोड्नुहुनेछ, यदि यसले कुरा गर्दैन। यो मनमोहक अब पनि धेरै जोडी र मान्छे द्वारा विकसित गर्न आवश्यक छ, तर तिनीहरू यसलाई सँगै गर्न सक्छन्। यो साझेदारलाई बताउन र तपाइँ के चाहनुहुन्छ चाहानुहुन्छ यो उस्तै महत्त्वपूर्ण छ - र यसले समावेश गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
यो मतलब छैन जंगली वेशभूषा वा असुविधाजनक थकान, यौन जीवनलाई मसालेका लागि "नयाँ चीजहरू" एक्लै गरौं। यो सेक्स मा इच्छाहरु को बारे मा छ। एक साथीले तपाईंसँग कुराकानी गर्दछ। अर्को साझेदार उनीहरूको पूर्तिको खोजीको यात्रामा - र यसको विपरीत।
पृष्ठ कामुक - रंग को बिरुद्ध झुकाव
कामुक रंगीन पुस्तक बाथटब मा कामुक